Cung Kim Ngưu nữ nghĩ gì về tình yêu? Điều cần biết về cô gái cung Kim Ngưu | Anybook.vn - Anybook
Cung Kim Ngưu nữ nghĩ gì về tình yêu? Điều cần biết về cô gái cung Kim Ngưu | Anybook.vn
Inona avy ireo toetran’ny vehivavy Taurus? Inona no dikan’ny fitiavana ny vehivavy Taurus raha oharina amin’ny antokon-kintana hafa? Iza amin’ireo famantarana ny zodiaka no mety amin’ny vehivavy Taurus? Andao hojerentsika amin’ny alàlan’ny lahatsoratra etsy ambany
Mahaliana foana ny toetran’ny olona samihafa eo amin’ny famantarana ny zodiaka, ary koa ny fahasamihafana fototra amin’ny famantarana ny famantarana ny famantarana 12, izay mahatonga ny fahasamihafana amin’ny fomba hamantarana ny antokon-kintana tsirairay. Ny famantarana ny zodiaka tsirairay dia hanana eritreritra samy hafa, tanjaka ary fahalemena samihafa. Miaraka amin’ny lahatsoratra anio, hianatra momba ny endri-javatra manokana amin’ny vehivavy Taurus isika? Inona avy ireo toetran’ny vehivavy Taurus? Inona no dikan’ny fitiavana ny vehivavy Taurus raha oharina amin’ny antokon-kintana hafa? Iza amin’ireo famantarana ny zodiaka no mety amin’ny vehivavy Taurus? Miaraha aminay hamantatra amin’ny alàlan’ny lahatsoratra etsy ambany.
1 I. Famintinana fohy momba ny vehivavy Taurus
2 II. Ny toetra mampiavaka ny vehivavy Taurus
2.1 1. Matanjaka nefa somary mafana fo
2.2 2. tso-po amin’ny fitiavana
2.3 3. Hendry, mahay mamorona, talenta ara-javakanto
2.4 4. Toetra sy somary mahafatifaty
2.5 5. azo itokisana
3 III. Ny fomba fijerin’ny vehivavy Taurus ny fitiavana
4 IV. Iza amin’ireo famantarana ny zodiaka lahy no mifanaraka amin’ny vehivavy Taurus?
4.1 1. Taurus vavy sy Cancer lahy
4.2 2. Taurus vavy sy Virgo lahy
4.3 3. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Capricorn
4.4 4. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Aries
4.5 5. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Sagittarius
I. Famintinana fohy momba ny vehivavy Taurus
Famintinana fohy momba ny vehivavy Taurus
Ny Taurus vavy dia famantarana zodiaka faharoa izay misy loharanon-kery be dia be miaraka amin’ny toetrany manokana sy antokon-kintana Taurus matanjaka. Ny vehivavy Taurus na Taurus vavy dia matetika fantatra fa tena mahay mifandray, mavitrika ary sariaka miaraka amin’ny toetra somary tapa-kevitra, matotra nefa tena tony ihany koa amin’ny asa sy ny fiainana andavanandro.
Ny vehivavy Taurus miaraka amin’ny mariky ny zodiaka dia ny ombidia, ny fanehoana marina indrindra ny toetrany tsara. Ity mariky ny zodiaka ity dia mbola deraina noho ny hatsaram-panahiny, ny fahazotoana, ny asa mafy ary ny fiezahana hatrany. Indrindra indrindra, ny Taurus dia olona tsy mivadika, manaja fitiavana foana ary olona tena azo itokisana. Eo amin’ny fiainana, ny vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus dia miezaka foana ny hitsangana, io famantarana ny zodiaka dia tena mafana sy ny olona mahay mikarakara ny hafa. Ny Taurus lahy sy vavy dia modely tsara ho an’ny fianakaviana.
II. Ny toetra mampiavaka ny vehivavy Taurus
1. Matanjaka nefa somary mafana fo
Mafy nefa somary mafana
Ny antokon-kintana Taurus vavy na Taurus dia mariky ny zodiaka izay mitondra hery be dia be ao anatiny ary koa manantena fiainana maro loko foana izy ireo noho ny toetrany mafana fo, matanjaka, miezaka manao izay rehetra tianao tsy misy tahotra na inona na inona. Ny antokon-kintana Taurus na Taurus vavy dia mazàna dia mitondra angovo falifaly sy mavitrika, mamorona atmosfera tanora sy mavitrika ho an’ny rehetra manodidina.
Ho mariky ny fitiavana sy firaiketam-po, ny vehivavy Taurus na ny famantarana ny Taurus dia hampiseho fahatezerana ihany koa rehefa misy havana na namana mijaly noho ny fahatezerana ary mirona te hanampy ny hafa foana. Na dia toetra tsara aza izy io, indraindray dia manome olana tsy ilaina ny vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus. Ity mariky ny zodiaka ity dia tena be herim-po ary tena sarotra ihany koa ny resena, miezaka foana izy ireo handresy ny fanamby rehetra, te-hanao ny zava-drehetra amin’ny tenany foana tsy manelingelina ny hafa.
2. tso-po amin’ny fitiavana
tso-po amin’ny fitiavana
Miaraka amin’ny toetra somary matanjaka sy sahy, fa amin’ny fitiavana, ny vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus dia olona tena malemy fanahy sy mamy, tsy mitovy amin’ny vehivavy Taurus mahazatra. Rehefa mifankatia ity mariky ny zodiaka ity dia tena malemy fanahy, marefo, ary miahy ny olon-tiany foana. Ny vehivavy Taurus na Taurus vavy indrindra dia olona tena misaina izay tsy mametraka ny eritreriny amin’ny hafa, fa mieritreritra ny fihetseham-pon’ny hafa foana aloha.
Ny Taurus vavy na ny Taurus vavy dia mahafantatra foana ny fomba hiarovana ny fitiavany ary koa manolotra ny fitiavany amin’ny antsasany hafa amin’ny fo manontolo. Ity famantarana ny zodiaka ity dia mihevitra ny fikarakarana ny fianakaviany sy ny olon-tiany ho toy ny andraikiny manokana. Tsy tiany ny olona miteny ratsy momba ny fianakaviany ary raha manao izany ianao dia hankahala sy hankahala anao, hampiseho ny tavanao.
3. Hendry, mahay mamorona, talenta ara-javakanto
Hendry, misaina mamorona, talenta ara-javakanto
Amin’ireo famantarana zodiaka 12, ny Taurus vavy na ny antokon-kintana Taurus dia manome fahatsapana mahery vaika amin’ny olona rehetra manodidina noho ny faharanitan-tsainy maranitra sy maranitra. Rehefa tojo olana, ity famantarana ny zodiaka ity dia hahita haingana ny vahaolana mety indrindra ho an’ny tenany. Indrindra indrindra, amin’ny maha-olona mahay manararaotra ny fahafahana ary tsy te-hamerina ny fotoana rehetra, ny antokon-kintana Taurus miaraka amin’ny fisainan’ny famoronana miavaka dia hahafantatra ny fomba hanararaotra ny fahafahana rehetra ary hanararaotra izany.
Tsy vitan’izay fa ny vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus dia malaza amin’ny talentany ara-javakanto ary koa ny fitiavana manokana ny zavakanto. Miasa mafy foana izy ireo ary miezaka mamita ny asa ampanaovina azy.
4. Toetra sy somary mahafatifaty
Ny maha-olona ary somary mahafatifaty
Ny toetra matanjaka, ny faharanitan-tsaina maranitra ary ny toetra mahavelona miaraka amin’ny vazivazy kely, ny vehivavy Taurus dia lasa marika tsy manam-paharoa amin’ny famantarana ny zodiaka 12. Ny Taurus dia mahafantatra foana ny fomba hanehoana ny hafa ary koa ny fampiasana feno ny fahaizany. Mahay mamorona rivo-piainana sambatra sy mavitrika amin’ny toerana misy azy ihany koa izy.
Io toetra somary sahisahy io nefa indraindray lasa mahasarika ny vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus, io famantarana zodiaka io dia mahasarika ny mason’ny hafa foana rehefa miseho izy, indrindra fa izay mahasarika anao.Ny ankizilahy dia mifankatia. Ankoatr’izay, miaraka amin’ny hafanam-pony sy ny fahavitrihany, ny vehivavy Taurus dia raisina tsara foana.
5. azo itokisana
Na inona na inona toe-javatra, ny vehivavy Taurus na ny vehivavy Taurus dia vonona mandrakariva hanampy ny olona tsy mieritreritra lalina na mangataka na inona na inona. Ny lazain’ny rehetra momba ny vehivavy Taurus dia olona matanjaka sy mendrika ny fitokisanao. Indrindra indrindra, any am-piasana, na dia manana fahasahiranana aza izy ireo, dia miezaka foana izy ireo hamita ny zava-drehetra amin’ny fomba tsara indrindra.
READ Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân thông dụng và mới nhất | Anybook.vn
Ny Taurus vavy dia fantatra fa mariky ny zodiaka izay mandray fampanantenana tena matotra, manana fahatsapana andraikitra ambony foana amin’ny zavatra nampanantenainy. Ity famantarana ny zodiaka ity dia miasa tsara, tsy hamela ny fihetseham-po manokana hanelingelina ny asa. Miezaka mafy izy ireo, fa tsy tiany ho diso fanantenana amin’ny hafa.
Hijery misimisy kokoa: Decoding Libra – Mistery avy amin’ny antokon-kintana Libra
III. Ny fomba fijerin’ny vehivavy Taurus ny fitiavana
Ny fomba fijerin’ny vehivavy Taurus ny fitiavana
Miaraka amin’ny toetra mampiavaka ny vehivavy Taurus, dia manome lanja sy mikendry foana ny fitiavana tso-po, tsy mivadika, amin’ny fo manontolo, amin’ny fo amin’ny olon-tiany izy ireo. Ny antokon-kintana Taurus vavy dia tsy tia manjavozavo, tapa-kevitra foana izy ireo amin’ny raharaham-pitiavany ary maneho ny fitiavany sy ny toe-tsainy mankahala amin’ny olona tsirairay, raha vao tia olona izy dia ho tapa-kevitra ny hanenjika. Na dia lazaina ho tsy mahalala fomba sy mahery setra aza izy io, io famantarana ny zodiaka io dia mampiseho fihetsika toy izany amin’ny olona tsy tiany. Ho an’ny olon-tiany, ny vehivavy Taurus dia mbola fantatra ho tovovavy malefaka sy malefaka izay afaka manatsara ny tenany mba hifanaraka amin’io olona io.
Ny Taurus vavy na ny Taurus vavy dia tia amin-kitsimpo foana, mahafoy zavatra be ho an’ilay tiany nefa tsy manisa na inona na inona, fa famantarana zodiaka be fialonana ihany koa izy ireo ary mety hahatonga anao ho reraka be indraindray. Satria olona matanjaka sy tapa-kevitra izy, raha fantany fa tsy manana fihetseham-po aminy ilay olon-kafa, dia tsy hisalasala ny hisintona ilay vehivavy Taurus na ny antokon-kintana Taurus, satria tsy te hanelingelina na iza na iza io famantarana zodiaka io. Indrindra indrindra, eo amin’ny resaka fitiavana, raha fantatrao fa mamadika anao ilay olon-kafa, dia tsy hisalasala ny vehivavy Taurus hanao tabataba, hanakana ny tavan’ny hafa ary hampitsahatra izany fifandraisana ara-pihetseham-po izany. Rehefa avy nisara-panambadiana, miaraka amin’ity famantarana ny zodiaka ity, dia tsy misy foto-kevitra momba ny fanaovana namana, na dia mihaona aza izy ireo, dia tsy miraika sy mangatsiaka.
IV. Iza amin’ireo famantarana ny zodiaka lahy no mifanaraka amin’ny vehivavy Taurus?
1. Taurus vavy sy Cancer lahy
Vehivavy Taurus sy Lehilahy Kansera
Raha mitambatra amin’ny lehilahy Cancer ny famantarana vavy Taurus, dia ho fitambarana mirindra avy amin’ny toetra sy ny fisainana izany. Raha toa ny vehivavy Taurus dia mihevitra, misaina ary mikarakara ny olon-tiany, ny lehilahy Cancer dia tso-po, ny hery manosika ny antokon-kintana Taurus eo amin’ny fiainana. Ny famantarana ny zodiaka Cancer dia fantatra fa mariky ny zodiaka manana fitsaratsaram-poana sy telepatia, ka amin’ny fijerena ny endrik’olona fotsiny dia azonao atao ny milaza ny eritreritry ny hafa. Noho izany, eo amin’ny fifandraisan’ny antokon-kintana roa Taurus sy Cancer dia mbola misy ny fifandirana ary io no fanamby tokony ho resena raha te hiaraka haharitra ela.
2. Taurus vavy sy Virgo lahy
Vehivavy Taurus sy Virgo Lehilahy
Tsy mpivady tonga lafatra 100% izy ity, fa mpivady izay noheverina fa manana fifangaroan’ny toetra tena mahaliana sy tsy manam-paharoa izay manampy amin’ny famoronana firindrana mahaliana amin’ny fifandraisan’ireo famantarana roa ireo. ity zodiaka ity. Miaraka amin’ny toetra somary mitovy, mifampiahy foana, ka indraindray ny antokon-kintana Taurus sy Virgo toa mahita ny sariny amin’ny alalan’ny hafa avy amin’ny toetra mampiavaka azy, ny fihetsika na ny fisainana aza. Virgo dia hisy fiantraikany amin’ny fiainan’ny vehivavy Taurus. Na izany aza, ny antokon-kintana Taurus indraindray dia mbola misy fotoana tsy mety ary toy ny fanamby ho an’ny Virgo, raha tsy voakarakara dia mety hisy ady mangatsiaka ny famantarana ny zodiaka roa raha tsy izy ireo, izay vonona hilefitra na iza na iza. Tena mora koa anefa ny manao firaisana sy mifampiresaka atsy ho atsy.
3. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Capricorn
Vehivavy Taurus sy lehilahy Capricorn
Ny vehivavy Taurus sy ny lehilahy Capricorn no mpivady tonga lafatra indrindra amin’ireo famantarana zodiaka 12, izay samy maneho ny singa eto an-tany miaraka amin’ny toetra mavitrika, tso-po ary miasa mafy. Samy miara-miasa amin’ny fitsipika sasantsasany ireo antokon-kintana roa ireo ary miezaka hatrany manatanteraka ny asa amin’ny fomba tsara indrindra. Io ihany koa ny endri-javatra mahatonga azy ireo hifanaraka ary afaka miaraka mandritra ny fotoana maharitra. Indrindra indrindra, samy manam-paharetana ny famantarana ny zodiaka, mandresy amim-paharetana ny fahasahiranana sy ny fanamby rehetra, ka ho fantany foana ny fomba hanararaotra ho an’ny tenany. Ankoatr’izay dia olona manana fisainana mamorona sy manampahaizana amin’ny famahana olana haingana sy ara-tsaina ihany koa izy ireo. Azo lazaina fa samy misy fiantraikany ny Taurus sy Capricorn ary miara-mandroso.
4. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Aries
Vehivavy Taurus sy lehilahy Aries
Miaraka amin’ny toetra somary marin-toetra sy tsy manan-tsiny, ny fitiavana an’ireo famantarana zodiaka roa ireo dia tso-po, tsy manan-tsiny ary mahafinaritra kely. Ity fampiarahana ity dia hamorona fifandraisana mahaliana, vaovao nefa mahaliana ihany koa. Ny vehivavy Taurus dia mahafantatra foana ny fomba hitadiavana ny fiarovana azy manokana, raha i Aries kosa no tia mahita ny toetran’ny olon-tiany ary manampy azy roa hivoatra. Mihoatra noho ny vehivavy, miaraka amin’ny hery entin’i Aries, ny Taurus dia hanatsara ny tenany hatrany na dia indraindray aza ao anatin’ny fifandraisana dia misy fifandirana sy adihevitra maro. Samy tokony hahay hifehy ny maha-izy azy sy ny tombontsoan’ny tena manokana mba hahafahana mampihavana izany fifandraisana izany lava kokoa.
5. Vehivavy Taurus sy Lehilahy Sagittarius
Vehivavy Taurus sy lehilahy Sagittarius
Ny lehilahy Sagittarius dia fantatra amin’ny maha-mahafinaritra azy ary voasarika amin’ny vehivavy matanjaka sy mazoto ary ny vehivavy Taurus dia modely. Raha tony sy mangina izy, dia olona mavitrika sy mavitrika izy, izay hahatonga ny mpivady tena mahaliana. Io toetra mampiavaka ny antokon-kintana Taurus io no mahasarika ny Sagittarius ary maniry foana ny hitazona izany fifandraisana izany mandritra ny fotoana maharitra.
Hijery misimisy kokoa: Rehefa tia Scorpio, olona manao ahoana ilay lehilahy? Famaritana ny toetran’ny lehilahy Scorpio
Noho izany, tamin’ny alàlan’ny lahatsoratra etsy ambony, ny 123job.vn dia nanome vaovao mahaliana ho an’ny mpamaky momba ny mariky ny Taurus vehivavy toy ny toetra mampiavaka, ny fomba fijery momba ny fitiavana ny antokon-kintana Taurus, ny famantarana ny zodiaka. Iza ilay lehilahy sahaza ny antokon-kintana Taurus. ,… Manantena aho fa handray ny lahatsoratra amin’ny fomba tsara indrindra ny mpamaky.
Previous: Mô tả công việc Nhân viên thống kê | Anybook.vn
Next: Thơ phận làm dâu hay, chùm thơ kiếp làm dâu với nhiều nỗi niềm | Anybook.vn